VAOVAO TOKONY HO FANTATRA - rov@higa
VAOVAO TOKONY HO FANTATRA
31 Janvier 2011, 23:32pm
Appel à manifestation samedi 5/2 14h Paris Bastille
31/01/2011 : ankolafy telo : hamafisina ny firisan-kina
Miezaka mafy ny mpanongam-panjakana hampisara-bazana ny ankolafy telo. Ampiadiany avokoa na ny samy ao anaty ankolafy iray na ireo ankolafy telo. Efa ambivitra manko ny fahaverezan’I TGV sy ny ekipany ka mitsipaka farany izy ireo. Tsy tokony hozarazarain’ny fiantsoana ny herivelona misy azy ireo mpiara-mitolona mba ahafahana manohitra izany fampisaham-bazana izany. Tsy tokony manaiky hampiadin’ny tombontsoa sy ny kajy politika ny mpitarika rehetra. Antananarivo dia renivohitr’I Madagasikara izany hoe iombonan’ny Malagasy tsy vaky volo ary tokony ho fitaratra amin’izany fiombonana izany ny ankolafy telo. Raha sanatria ka mbola misy manao kajikajy politika dia aoka tsy ifamitaka amin’ny vahoaka satria efa be izay dina nifanaovana izay.
31/01/11 : Iharan’ny antsojay ihany koa ny zanaky ny Atsimo Atsinanana
Tsy hita popoka ny folo mianadahy zanaky ny Sud-Est amin’izao fotoana izao satria « interpelé » teo Ranomafana Ifanadiana ny fiara nitondra azy ireo. Nihazo ny faritra niaviany izy ireo rehefa avy nanatanteraka hetsika lehibe teto an-drenivohitra nitakiana ny famoahana ny Lt-Col. Charles Andrianasoavina sy ireo gadra politika rehetra hatramin’ny niantombohan’ny krizy 2009. Fantatra ihany koa fa misy mpianatra ao amin’ny ENAM Androhibe avy amin’iny faritra iny tsy hita popoka hatramin’ny Alakamisy teo. Amin’izao fototna izao dia mandrangitra tanteraka ny ady eo amin’ny Sud-Est sy ny Merina ny radion’i TGV satria mieritreritra izy ireo fa izany no hampivaky ny tolona ka ahafahany mahazo ny fandresena. Iverenan’izy ireo hatramin’ny tantara tany aloha be tany ka mety hiteraka fifanolanana amin’ireto foko Malagasy roa tonta ireto. Mbola hevidratsin’ny menasofina ihany ny fahitana izao araky ny zarazarao hanjakany ka hamerenan’izy ireo indray ny fanjanahana eto Madagsikara. Amin’izay fotoana izay dia afaka manararaotra ny harena rehetra izy ireo ary ho tompony mangataka atiny ny vahoaka Malagasy.
Toe-tsaina lomorina …
Tsy handairan’izany fampiadiana foko izany intsony ny Malagasy amin’izao fotoana. Tsy misy tsy mahalala fa i TGV sy ny namany no nanapotika ny firenena fa tsy misy idiran’ny Malagasy hafa. Ka izy ireo no iantefan’ny fampandrenesana sy ny antso atao’ny zanaky ny atsimo atsinananana fa tsy ny Merina velively araky ny iezahana ivoizana azy. Ny Lehiben’ny faritra Vatovavy Fitovinany koa dia miditra amin’ity lalao maloto ity ary nanambara fa hanakana hatramin’ny farany ny hetsika rehetra itakiana ny famoahana ny Lt-Kol Charles sy ny gadra politika rehetra. Na izany aza tafatsangana tamin’ny 30 janoary teo ihany ny Biraon’ny « Grand Sud-Est » tao Manakara ary misy Raiamandreny sy Ampanjaka ao anatiny.
Ampamoaka nataon-dry Kly Charles Dinihina any Addis Abeba
Mitodika any Addis Abeba misy ny foiben-toeran’ny Firaisambe Afrikanina ny sain’ny mpanara-baovao maro.
Anatiny tanteraka amin’ny fihaonambeny faha-16 mantsy ny Vondrona Afrikanina, izay andinihana akaiky ireo raharaha manahirana aty Afrika, indrindra ny ao Côte d’Ivoire. Tamin’ny andro voalohan’ny fivoriana omaly alahady no nahavoafidy an’i Teodoro Obiang Nguema, filoham-pirenena am-perinasa any Guinée Équatoriale (in-telo voafidy ary tonga teo amin’ny fitondrana tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana) ho filohan’ny Firaisambe Afrikanina mandritra ny herintaona, nandimby toerana an’i Bingu Wa Mutharika, filohan’i Malawi. Nandefa taratasy izay novakiana nandritra ity fihaonana an-tampony any Addis Abeba ity ny filoha Ravalomanana, mampahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara taorian’ny ampamoaka nataon’ireo manamboninahitra ambony isany, ny jeneraly Rakotonandrasana Noël sy ny kly Andrianasoavina Charles ary manazava amin’ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ary vahiny manan-kaja miatrika ity fihaonana an-tampony faha-16-n’ny Firaisambe Afrikanina ity ny anton’ireo fitoriany mikasika ny fanonganam-panjakana nitranga teto ny taona 2009.
Manoloana ny toe-draharaha misy ankehitriny dia heveriko, hoy ny filoha Ravalomanana, fa mendrika hahalala ny antony sy ny fototr’izao krizy izao ny Malagasy. Nanamafy an-tsoratra ny tenany fa misokatra ary vonona hatrany amin’ny fifampidinihana saingy mihevitra kosa izy fa zon’ny vahoaka Malagasy ny mahalala ny marina ary rariny loatra izany, koa matoky ny fitsarana sy mpitsara Malagasy izy amin’izany.
Tsy azo ekena eto amin’ity firenena ity ny kolontsain’ny tsimatimanota, ary mendrika izany tany tan-dalàna izany i Madagasikara, hoy ny filoha Ravalomanana. “Koa zava-dehibe ny hivoahan’ny marina ary dia handeha mora ho azy ny fifamelana sy fifampihavanana satria mifankafantatra tsara ny rehetra, iza no nanao inona ?”, hoy izy nanohy ny fanazavany. Andrasana izay ho fehin-kevitry ny mpizaika amin’ity anio ity, izay hifaranan’ny fivoriana. Mandritra izany eto an-toerana dia miditra amin’ny herinandro farany ny iraka fanelanelanana tarihin’ny Dr Leonardo Simao, avy amin’ny vondrona SADC. Maro koa ireo hevitra mivoaka etsy sy eroa amin’ny famahana ny krizy eto ankoatra ny fanerena ataon’ny vondron-kery eto anatiny manoloana ny fikatsoan’ny raharaham-pirenena.
Niatrika ny fotoam-panokafana ity fihaonana an-tampony faha-16 ity ny filoham-pirenena frantsay, Nicolas Sarkozy, izay sady mitarika ny vondrona G8 no mitarika ny vondrona G20 ihany koa, toy izany koa ny Sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana, Ban Kimoon, sy ireo filohana fikambanana iraisam-pirenena toy ny tale jeneralin’ny Banky iraisam-pirenena, Rtoa Ngozi Okonjo-Iweala, teratany nizeriana.